सामाज – Page 442 – Sancharak
Home > सामाज (Page 442)
दाउरा बेचेर कितापकपीको जोहो गर्दै बालक
sancharakadmin ३० पुष २०७२, बिहीबार १०:५१ January 14, 2016 समाचार, सामाज
गोपाल बराल, बर्दिवास, ३० पुस । पढ्नकै लागि खर्चको जोहो गर्न विद्यार्थी आफैँले केसम्म गर्न सक्छन् ? महोत्तरीको वर्दिबास–१० माइस्थानका १२ वर्ष ननाघेका दुई बालकले पढ्ने खर्च जोहो गर्नकै लागि जङ्गलबाट दाउरा काट्ने काम रोजेका छन् । जङ्गलबाट काटेर ल्याएको दाउरा बेचेर आएको पैसाले कलमकपीको गर्जो टार्ने गरेको बताउने यी दुबै बालकको
जब मुसहर बस्तीमा धुर्मुस र सुन्तली पसे
sancharakadmin २७ पुष २०७२, सोमबार १५:२१ January 11, 2016 सामाज
राजकरण महतो/ वर्दिबास, महोत्तरी । महोत्तरीको वर्दिबास नगरपालिका २ को एउटा मुहल्लामा ३५ वर्षीय रामपृत सदा मुसहरले जोडेको झिनो र होचो झुपडी छ । जहाँ उनका परिवारका छजना सदस्यहरुले घाम अस्ताएपछि घाम नझुल्कुन्जेलसम्म ओत लाग्छन् । पुस माघको थुरथुर काम्ने जाडोमा सदा परिवार महिनौदेखि राति पल्टन सकेको छैन् । भुइँमा पराले
पञ्जा छाप यसरी बन्यो चुनाव चिन्ह
sancharakadmin २६ पुष २०७२, आईतवार ११:१२ January 10, 2016 सामाज
नेपाल सदभावना पार्टीको चुनाव चिन्ह पञ्जाछाप हो । गजेन्द्रनारायण सिँहनेतृत्वको नेसपाको यस पञ्जाछापलाई हासिल गर्न विभिन्न चिरामा विभाजित रहँदैआएका सदभावनाकर्मीहरुबीचको शक्तिसङ्घर्षको कता जति दिक्कलाग्दो वाम पट्यारिलो छ त्यति नै रोचक छ चुनावी दङ्गलमा पञ्पाछापले भाग्य उजिलिने कथा । भनिन्छ, मधेशको उच्चारणसमेतलाई साम्दायिक मानिने र मधेशीहरुमध्येका अत्यन्त न्यूनसँख्यामा व्यक्तिहरुले मधेश मुद्दामा
महोत्तरीका गाउँबस्ती बन्न थाले ‘साउदीअरब’
sancharakadmin २६ पुष २०७२, आईतवार ०८:४१ January 10, 2016 सामाज
गोपाल बराल महोत्तरी, २६ पुस । गाउँघरमै रोजगारीको सम्भावना नभएपछि महोत्तरी जिल्लाका अधिकांश गाउँबस्तीमा तन्नेरीहरु देखिन छोडेका छन् । पूर्णकालिन काम नपाएर बिल्लीबाँठ भएका युवकहरु लगातारको आन्दोलनले विरक्तिएर विदेशिएपछि गाउँबस्तीमा युवाविहीनता बढेको हो । बन्द र हड्तालका कारण मधेशको जनजीवन ठप्प भएको बेला स्थानीय युवकहरुले गाउँठाउँमा पहिलेबाट उपलब्ध रोजगारीका औसरबाट वञ्चित रहँदैआएका
सप्तरीका डाक्टर मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा ३१ पटक फेल अन्य प्रमाण पत्र पनि नक्ली भएको शंका
sancharakadmin २३ पुष २०७२, बिहीबार ०९:२६ January 7, 2016 सामाज
मधेश\_एमबिबिएस पास गरेपछि चिकित्सा सेवाका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको चिकित्सक नाम दर्ता (लाइसेन्सिङ) परीक्षा अनिवार्य पास गर्नुपर्छ । एमबिबिएस पास गरेपनि यो परीक्षामा ३१ पल्टसम्म अनुत्तीर्ण भएका डाक्टर पनि छन् । उनी हुन शशिकुमार यादव । हालसम्म उनी काउन्सिलको परीक्षामा सबैभन्दा बढी पटक फेल हुने डाक्टर हुन् । उनले १२ वर्षदेखि
कठै ! कोठी बेपत्ता पो भए
sancharakadmin २३ पुष २०७२, बिहीबार ०२:०३ January 7, 2016 सामाज
गोपाल बराल /महोत्तरी महोत्तरी जिल्लासहितका मधेसका गाउँबस्तीमा अब माटाका कोठी (भकारी) देखिन छोडेका छन् । चामल, गहुँ, चना(बदाम) र रहरलगायतका घुन (अन्नबाली खाने किरा) चाँडै लाग्ने खाद्यान्न जोगाएर भण्डारण गर्न बनाइने माटाका कोठी अब गाउँघरमा देखिन छाडेका हुन् । अन्नपात भण्डारणका लागि घरघरमै बनाइने गरिएका माटाका कोठीका ठाउँमा अब प्लाष्टिकका डोल, बाल्टिन
गजेन्द्रवादी अध्यक्ष तिबारी बिहार भ्रमणमा
sancharakadmin २२ पुष २०७२, बुधबार ०३:३८ January 6, 2016 सामाज
राजविराज । नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) का राष्ट्रिय अध्यक्ष विकास तिवारी मधेश आन्दोलनको पक्षमा समर्थन जुटाउन भारतको बिहार भ्रमणमा निस्केका छन् । चार दिन अगाडि बिहार पुगेका उनले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुसँग मधेश आन्दोलनबारे छलफल समेत गरेका छन् । तिवारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीका केन्द्रीय महासचिव एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री
असई हत्याको जिम्मा लिने जयकृष्ण गोइत को हुन् ?
sancharakadmin २१ पुष २०७२, मंगलवार ०७:२७ January 5, 2016 सामाज
परिष कुमार कर्ण सप्तरी \_ जयकृष्ण गोइत् लामो समयसम्म नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा कठोर संघर्ष गर्ने राजनीतिक व्यक्तित्व हुन् । तत्कालिन नेकपा माओवादीको मधेशी मुक्तिमोर्चाका नेतृत्व तहमा रहेर मधेश र मधेशी जनताको हक अधिकारका लागि उनले सशक्त आवाज उठाएका थिए । सोही क्रममा माओवादीबाट विद्रोह गरेर २०६१ साल साउन १० अखिल
sancharakadmin २१ पुष २०७२, मंगलवार ०६:३७ January 5, 2016 Uncategorized, सामाज
परिष कुमार कर्ण सप्तरी । स्वतन्त्र मधेशका लागि मधेसमा ‘जनमत संग्रह’ गर्दै हिँडेका सिके राउतका कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्न सिराहा जिल्ला प्रशासनले प्रहरीलाई आदेश दिएको छ । सिके राउतका कार्यकर्ताले ‘नेपालमै बस्ने कि मधेसलाई अलग्गै देश बनाउने’ भन्ने दुई विकल्पमा जनमत संग्रहको अभयास गर्न थालेको भन्दै यसलाई क्षम्य मान्न नसकिने डा. सिरहाका
प्रहरीको दमन बाट सदभावना पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष राजेन्द्र महतो सहित दर्जनौ नेता घाईते
sancharakadmin ११ पुष २०७२, शनिबार १४:२० December 26, 2015 सामाज
विराटनगरको सीमावर्ती जोगबनी नाकामा धर्ना बसिरहेका सदभावना पार्टीका राष्टिय अध्यक्ष राजेन्द्र महतो प्रहरीको लाठी प्रहारबाट घाइते भएका छन् । सीमा नाकामा शान्तिपुर्ण तरिका बाट अवरोध गर्न बसेका महतोलाई धर्नामा बस्नबाट प्रहरीले रोक्न खोज्दा झडप भएको हो । लाठी प्रहारबाट अध्यक्ष महतो, सहित दर्जनौ नेता घाईते भएको मोर्चाले जनाएको छ ।